ပဟေဠိ အဖြေညှိကြတာပေါ့…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ပဟေဠိ အဖြေညှိကြတာပေါ့….
Posted by johnnydeer on Feb 21, 2013 in Short Story | 11 comments
ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ…ဥာဏ်စမ်းပဟေဠိလေးလို့ ယူဆချင်ရင် ယူဆကြပါတော့…အဓိက ကတော့ ဘာလုပ်သင့်လဲ…ဘာဖြစ်သင့်လဲ ဆိုတာကိုပါ…ကောမန့်တွေ ပေးပြီးကြရင် ကျွန်တော် ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပြောပြပါ့မယ်…
မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော် တတိယတန်းတုန်းကပေါ့….မိဘတွေက ၀န်ထမ်းတွေဆိုတော့ ကျောင်းခဏခဏ ပြောင်းရတယ်…အဲ့ဒီကျောင်းမှာ ကျွန်တော်က ကျောင်းသားသစ်ပေါ့….ဖြစ်ပုံက ကျောင်းဖွင့်ကာစ မိုးရာသီကြီးမှာပေါ့…အဲ့ဒီနေ့က ကျွန်တော် အစားမှားပြီး ၀မ်းပျက်နေတယ်….ကျောင်းသားသစ်ဆိုတော့ ခွင့်တိုင်ရမှာ စိုးတာနဲ့ ကျွန်တော်ဇွတ် ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်…အတန်းဝင်တဲ့ ဆရာမက ကျောင်းသားဟောင်းတွေ ပြောစကားအရ နာမည်ကြီး…စည်းကမ်းကြီး…အရိုက်ကြီးတဲ့ဆရာမ …ဆရာမက စာသင်နေတာ အရှိန်တအားကောင်းနေတယ်…ကျွန်တော့် ၀မ်းက ရစ်ပြီးနာနေတယ်…အိမ်သာ သွားရအောင်ကလဲ ဆရာမစာသင်တာ ဖြတ်ပြီး ခွင့်မတောင်းရဲဘူး….အောင့်တယ်…သည်းခံတယ်…သည်းခံရင်း သည်းခံရင်းနဲ့ပဲ ဘယ်လိုမှ မရတော့ဘူး….နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တဲ့ အဆုံး ဆရာမဆီ အိမ်သာသွားဖို့ ခွင့်တောင်းပါတယ်…ဆရာမကလဲ ခွင့်ပြုပါတယ်…အိမ်သာ တက်ချင်စိတ် တအားများတော့ ဟိုး…ခပ်လှမ်းလှမ်းက အိမ်သာဆီကို တအားပြေးပါတယ်…သွားချင်တဲ့ အရှိန်ကော…ပြေးတဲ့ အရှိန်ကောကြောင့် ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ပဲ လမ်းမှာပဲ မရိုသေ့စကား ထွက်ကျ ကုန်ပါတယ်….အိမ်သာဆီကိုတော့ ရောက်သွားပါတယ်….
ကျွန်တော် အိမ်သာတက်ရင်း စဉ်းစားတယ်…ကျွန်တော့်ဆီမှာ ၀မ်းသွားထားတဲ့…၀မ်းတွေ ပေနေတဲ့ ဘောင်းဘီတထည်ပဲရှိတယ်…ကျန်တာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိဘူး…တတိယတန်းဆိုတော့ နည်းနည်းရှက်ရကောင်းမှန်းလဲ သိနေပြီ…ဒီအဖြစ်အပျက်သာ တကျောင်းလုံးသိသွားရင် မျက်နှာ ဘယ်ထားရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး…အိမ်သာတက်နေရင်း ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်….ကျွန်တော် ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ…ဘာဖြစ်သင့်လဲ..ကျွန်တော့်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေက ဘာလဲ….ဗြုန်းဆို ကျွန်တော်တစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး လုပ်ခဲ့တယ်…ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်…ကျွန်တော် ဘာလုပ်ခဲ့တာပါလဲ….
နည်းနည်း ချက်တတ်နေပီဆိုဒေါ့ကာ ..
တန်းလန်းလေးနဲ့ ထွက်ရဲမှာ မီဟုတ်ဘူး ..
ဘောင်းဘီကို ချွတ် အင်္ကျီကို ဘောင်းဘီလုပ် ဝတ်လိုက်ရင်လည်း
အိမ်သာထဲ ချိဒဲ့ ရေဒွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် လောင်းပလိုက်မယ် …
ဒါမှ မဟုတ် ချော်လဲသလိုလို၊ ဘာလိုလို ဖြစ်သွားသလို ..
အဝတ်တွေ ညစ်ပတ်သွားအောင် လုပ်ပလိုက်မယ် …
ဒီခါ .. မင်ဂါဘာ ချာမ .. အဲလေ .. ဟုတ်ဘူး ..
တားတား ချော်လဲသွားလို့ဘာ ချာမ .. လုပ်ပီး ..
အဲ့လို လုပ်ခဲ့ဒါလားဟင်င်င် ..
ကျုပ်သာဆို ရေမြောင်းနီးရင် ရေမြောင်းထဲခုန်ချပြီးတော့မှ
ရေမြောင်းထဲ ချော်ကျသွားတယ်လို့ လုပ်မယ်။
အဲဒါဆိုရင်တော့ မိုးရွာထဲထွက်ရပ်ပြီး တကိုယ်လုံးရွှဲရွှဲစိုတော့မှ အတန်းပြန်ခွင့်တိုင်ပြီး အိမ်ပြန်မယ်
ဒါမှမဟုတ်- အနည်းဆုံးတော့ မိုးရာသီဆို ရွှံ့ဗွက်တော့ရှိမှာပဲ..
ဗွက်အိုင်ကြီးကြီးထဲလူးပြီး ချော်လဲတယ်လို့ လုပ်ရင်လဲ မဆိုးဘူး…
န၀ဒေးဆောင်က အဆောင်သားအရွယ်ဆို – သူများရေချိုးနေတဲ့ ရေချိုးခန်းတံခါးပေါ်က လုံချည်ကို ခပ်တည်တည်ကောက်ဝတ်သွားလိုက်ရတော့…
ဟီးဟီး ကျုပ် ငယ်ငယ်တုံး ကလဲ အဲလို ဖြစ်ဘူးတယ်။ ဒါပေသိ အဲလောက်တော့ ကြီးသေးပါဘူး။ ပြောနေပါနဲ့တော့ဂျာ။ အဲတာလည်းပီးရော လူကို ချီးပေချီးပေနဲ့ ခေါ်လိုက်ကြတာ…..
ချီးပေကြီး ကိုးကွ …
မထင်မှတ်ဘဲ ခုလို ပြန်ဆုံရတာ
တကယ်ဂျီးကို ဝမ်းသာလှသကွာ .. ဟီးဟီး ..
(နောက်တာဘာ ကန်တော့နော် ဘဘကြီး Garuda)
အံမယ်.. မိကျောက် လေသံနဲ့ပါလား ဟေ့..။ ဘာဖြစ်ဖြစ် သာဓု ပါကွယ်။ တစ်ခုတော့ တောင်းဆိုပရစေ..ဘဘကြီးလို့တော့ မခေါ်စေချင်ဘူး။ ဦးတို့ အန်ကယ်တို့ဆို တော်သေး :om:
အစကတော့ ကောမန့်ဆယ်ခုလောက် ပြီးမှ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ…ရေးမလို့…ဒါပေမယ့် ရွာသူရွာသားတွေက တကယ့်ပညာရှိကြီးတွေပဲ…ရွဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး…တကယ်ပြောတာ…ပညာရှိတွေများတွေးကြည့် ရင် ပြေးကြည့်တာထက်မှန်တယ်ဆိုတာ တကယ်ပါလားဗျို့…
ကျွန်တော် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အိမ်သာတက်ရင်း ထိုင်စဉ်းစားတယ်…ငါ ဘာလုပ်ရမလဲပေါ့…အဲ့ဒီအချိန်မှာ အိမ်သာတည့်တည့်မှာ မိုးရွာထားလို့ ရေဗွက်ကြီး နည်းတာမဟုတ်ဘူး…ကိုင်း..လာရော့ဆိုပြီး ရေဗွက်ထဲ တခါထဲ ခုန်ချပြီး စိမ်ပြေနပြေ စိမ်နေလိုက်တယ်…အိမ်သာသွားရင်း ချော်လဲလို့ ဗွက်တွေ ပေသွားပါကြောင်းပေါ့…ချီးပေတာထက်စာရင်တော့ ချော်လဲ ဗွက်ပေတာက တော်သေးတာပေါ့ဗျာ..ဟုတ်ဖူးလား…ရေးချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဆိုးဆုံး ကြုံလာတဲ့အခါ တခါတလေ မဆိုးတဆိုးလေး နဲ့ ကာဗာ လုပ်သင့်ရင်လဲ လုပ်ရတဲ့ အကြောင်းလေးကိုပါ…
ပညာရှိများ တွေးကြည့်ရင် ပြေးကြည့်တာထက်မှန်တယ် ဆိုသလို…
ကိုယ်တိုင်တော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ ပညာရရှိသွားပါကြောင်းးးးးးးးးးး :hee:
ကျုပ်လဲ ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးလို့ ပြောနိုင်တာ လို့တော့ မထင်ပါဘူးမဟုတ်လား…
ကျောင်းဘေးမှာ သနပ်ခါးခဲတုံးထုတ်တဲ့ မိသားစုအိမ်တွင်းလုပ်ငန်းလေး အဲဒီချိန်ထဲက အောင်မြင်သွားလိုက်တာ စက်ရုံကြီးတောင် ပိုင်သွားသတဲ့…
ဘာပါလိမ့်…… ဝင်ပြီး အဖြေညှိကြည့်ဦးမယ်ဆိုပြီး .. စာလေးဖတ်လိုက်တာ .. ဗိုက်နာလာလို့အိမ်သာ တန်းပြေးရတယ်ဗျို့.. ဒဂယ်ရီးပါ..
သားကဗိုက်ဆာနေတာ ခုတောင် ဆိုင်ရှေ့ကကြက်သားသုပ်မှာထားတာ
တော်ပီ ညကျမှ မြည်းတော့မယ်။